Shirka madasha wada tashiga Qaran oo maanta ka furmaya Baydhaba. - Wargeyska Faafiye
Shirka madasha wada tashiga Qaran oo maanta ka furmaya Baydhaba.
Baydhabo-Shirka madasha wada-tashiga qaran ee Dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul Goboleedyada, ayaa maanta oo Arbaca ah lagu wadaa inuu ka furmo Magaalada Baydhabo , sida ay sheegeen qaar ka mida masuuliyiinta maamulka Koofur Galbeed.
Shirkan oo ah kii ugu dambeeyay ee looga arrinsanayo hannaanka doorashooyinka Dalka Soomaaliya ee sanadkan 2016 dhici doona,ayaa lagu lagu dhammaytiri doonaa go’aankii horraantii bishan laga soo saaray shirkii Hoggaamiyeyaasha madasha ku yeesheen Magaalada Muqdisho,
Madasha wada tashi ee maanta lagu wado in laga furo Byadhaba ayaa la filayaa in laga soo saaro qodobo ku aaddan waqtiga ay dhici doonto doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka, labadiisa kuxigeen iyo tan Madaxweynaha intuba.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMan eats another man's face in Florida .Canada oo 22 sano ka dib safiir u Magacowday Soomaaliya."Qoor gooyaha Daacish" oo la aqoonsaday.Qarax ka dhacay xarunta shirka agteedaDaawo Video: Maxaa keenay is Furitaanka Badan qurbaha .